Nhwɛsode:Infobox foodEdin ahoro Fufuo, foufou, foofoo, foutou, sakora,sakoro,couscous de cameroun
Neɛma a wo de yɛ Bankye, borɔdeɛ ne mankeni
Eduane no mu ahoɔden 267kcal (1118 kj) wɔ 100g biara mu.
Eduane duro a ɛwɔ mu protein 2g
Aduane a ɛne no sɛ pap, nsima, sadza, ugali
Fufu a ɛwɔ (benkum) so ne abɛ nkwan (a ɛwɔ nifa so)
Fufu (or fufuo, foofoo, foufou) yɛ aduane a agye din wɔ ebibirem atɔeɛ ha. Wɔ Twi kasa mu no, fufu kyerɛ sɛ "fa fra" ma enyɛ merɛ ne tromtrom ma Akanfo kuo ahoro wɔ Ghana ne Abibiman ahoro nyinaa. Yɛ de bankye fra borɔdeɛ anaa mankani, na ya wɔ wɔ waduro ne wɔma mu. Sɛ yɛ wɔ fufu no wie a yɛ de di nkwan te sɛ Nkrakra nkwan, Abenkwan, Nkatenkwan, Abunu Abunu nkwan. Wɔ abibirem atɔeɛ ha no, aman no bi de di Nkwan a ɛhyehye , nkruma, anaa forɔeɛ biara a wɔ pɛ.
Fufu yɛ aduane a aman beberee di wɔ Atɔeɛ ne Nfinfi wɔ Abibirem ha. Aman a ɛka Gana ho a wo di fufu ne, Sierra Leone, Guinea, Liberia, Cote D'Ivoire, Benin, Togo, Nigeria, Congos aman abien nyinaa, Cameroon, ne Central African Republic, Angola ne Gabon, ne Caribbean. Wɔ yɛ no amanmerɛ kwan so wɔ Gana, Cote D'ivoire, Liberia ne Cuban, wɔ wɔ bankye ne brɔdeɛ a ɛmbereyɛ anaa mankeni, anaa sɛ wo de bankye, brɔdeɛ anaa mankeni sam bɛ fra nsuo na waka wɔ gya so. Wɔ dane dane no ko si sɛ ɛbɛyɛ nea wɔ pɛ na wɔ de edi nkwan biara a wɔ pɛ. Nigeriafo ne Abibirem aman no bi de bankye more a abɔ nsa a yɛ frɛ no Akpu wɔ Nigeria man mu na ɛyɛ Fufu na ɔmo de adi forɔeɛ a ɛte sɛ nkwan. Esam bi te sɛ , semolina, eburo sam anaa borɔdeɛ a ya putɔ na wɔ de si bankye sam anan mu. Yɛ de yen sa na edi fufu, na ya te fufu no bi di abɔ nkwan a yedi no mu.
1 Abibirem fufu
2 Caribbeanfo fufu
4 Sɛ nea yɛ yɛ no
5 Ahoɔden a ɛwɔ mu
7 link a efi abɔnten
Abibirem fufu[sesa | edit source]
Portugalfo adetɔnfo de bankye fi Brazil ba Abibirem wɔ 16th century mu. Wɔ Gana, fufu, a ebinum nso frɛ no fufuo, yɛ fitaa na ɛsan yɛ tentann (sɛ wanfa brɔdeɛ anfera bankye no na sɛ wɔ wɔ aa). Amanmerɛ kwan a wɔ fa so di fufu ne sɛ wo de wonsa bɛ te fufu no bi na wo de abɔ nkwan mu edi.
Wɔ Côte d'Ivoire, wɔ frɛ no “foutou”. Ivory coastfoɔ “foufou” yɛ kwadu a ya yam a ɛdɛ, ɛna “foutou” yɛ dea ɛyɛ din,ɛmu yɛ duru a yɛ nya wɔ bayerɛ, bankye, kwadu, taro anaa emu biara a yɛ de afra.
Wɔ ɔman a wɔn ka brofo te sɛ Cameroon no, yɛ frɛ no“couscous” (Ɛnyɛ aduani a ɛwɔ Abibirem Atifi couscous).
Nea ɛne no sɛ wɔ African Great Lakes mamtamu yɛ ugali. Wɔ ugali no wɔ de aburo sam na ɛyɛ (masa), ɛna wɔ di wɔ Abibirem Anaafoɔ. Kenyafoɔ ,ne Tanzaniafoɔ nso frɛ no ugali,ubugali wɔRwanda. Aduane a ɛne no sɛ no din de nshima wɔ Zambia, nsima wɔ Malawi, sadza wɔ Zimbabwe, pap anaa vuswa wɔ Abibirem Anaafoɔ, posho wɔ Uganda, luku, fufu, nshima, moteke, semoule, ugali ne bugari wɔ Kwasamafo ma Congo ne Democratic Republic of the Congo ne phaletšhe ne Botswana.
Caribbeanfo fufu[sesa | edit source]
Wɔ Caribbean aman a a wɔn ase fi Abibirem atɔeɛ no, te sɛ Cuba, Jamaica, Dominican Republic, Haiti ne Puerto Rico, borɔdeɛ, bankye anaa bayerɛ a wa pu tɔ afra neɛma ahoro. Wɔ Cuba, aduane no din te sɛ nea Abibirem fo frɛ no naa, a ɛyɛ fufú anaa wɔ de nkyerɛkyerɛ mu kakra ka ho te sɛ fufú de platano or fufú de platano pintón. Wɔ lsland ahoro so no , wɔ frɛ fufú sɛ mangú wɔ Dominican Republic, mofongo ne funche wɔ Puerto Rico. Nsonsonyɛ a ɛda Caribbean "fufú" ne Abibirem atɔeɛ fo no yɛ aduane ne su ne ne dɛ. Sɛ wo fi Cuba a fufú' no nte sɛ nea Abibirem deɛ no te na emmom ɛte sɛ mɔre ne ɛtoa a ya ka abom.
Wɔ Haiti wɔ frɛ no tonm tonm ne Foofoo. Wɔ taa de bradfruit na ɛyɛ nanso wɔ be tumi de borɔdeɛ anaa bayerɛ ayɛ, na wɔ taa de di nkwan anaa forɔeɛ a ɛte sɛ nkruma. Amanfo a ɛwɔ Haiti anaafoɔ mamtamu na ɛtaa di, a yɛ frɛ wɔn Grand'Anse neSud nkorabata. Kurow a yɛ frɛ no Jérémie na yɛ frɛ no tonmtonm kuropɔn ma Haiti.
Nigeriafo aduane: fufu a wɔ tɔn wɔ Lagos abonten so.
Puerto Rican mofongo, sɛ neɛ ɛbɛyɛ a won twe won ho nfi Caribbean amanmerɛ nti, wa fa fufú a ɛho wɔ soro na wɔ de neɛma pii ka ho. Abere a wɔ gu so ki ta Abibirem suban no mu , mofongo afa island's Iberian eduane ammamerɛ, na wɔ de ayɛ aduane a wɔ de borɔdeɛ a wakye, bankye anaa breadfruit. Ɛntesɛ Caribbean fo ne Abibirem Atɔeɛ fufús, mofongo fufu mu yɛ din. Sɛ wo bɛ yɛ mofongo a, wo de brɔdeɛ a embere yɛ na wakye wɔ angwa pii mu baako ɛnte sɛ tostones a wɔ kye no mienu no. Na wɔ de garlic, nkyen,mɛko tumtum ne olive angwa aka ho awɔ wɔ waduro mu. Wɔ wie a na wa dane dane no ma na yɛ sɛ nea wɔ pɛ. Wɔ de mogya nam a yɛ frɛ no chicharrón, hyɛ borɔde a yakye no mu. Akwan ahoro bi a yɛ tumi nua na ɛkyreɛ sɛ wo di mogya nam anaa nwura ɛbɛ yɛ te sɛ salsa criolla" (te sɛ American Creole sauce) na wo ahwie agu so. Wɔ "mofongo relleno," a ayɛ bɛtɛɛ wɔ Puerto Rico Atɔeɛ, Nsuo mu nam na edi hene wɔ hɔ. Wɔ ammanmerɛ mu no wɔ de mogya nam ne nea ɛkeka ho hyɛ mofongo mu na wɔ de akokɔ nkwan adware no. Esan ɔkwan a wɔ fa so yɛ ne neɛma a wɔde yɛ no nti , Nea ɔkyerɛ awhensem Arose N Daghetto frɛ mofongo sɛ ɛyɛ fufu bi a yɛ frɛ no "fufú paella" na ɔto ni din sɛ ɔyɛ " fufús mu nyinaa papa." Aduane a yɛ frɛ no funche a wɔ de taro, borɔde a embere yɛ ne nea abere a wanua de bɔta, garlic, ne preko seradeɛ anua a agye din wɔ Puerto Rico. Sɛ wɔ fe te na wɔ bɔ no nkuruwa nkuruwa a, wɔ de sesame aba na edi. Wɔ twerɛ Funche gu Puerto Rican aduane nhoma mu wɔ afe 1800s mu, nanso wo be tumi ahu ɛkyi wɔ abere a na Abibirem nkoasomfo no wɔ island no so no. Funche ɛndɛ wɔ Puerto Rico yɛ aburo aduane a ya nua wɔ kube nufusuo ne nufusuo mu.
fufu a ya kata ho
Ahaban anaa fufú abomu no wɔn kye wɔ Anglo-Caribbean. Wɔn taa nfa borɔde nyɛ, te sɛ wɔ taa de nua aduane ahoro no. Wɔ taa de fufu ka nkwan ho anaa wɔ de si nkwan aduane bi nkyɛn. Wɔ Antigua, fufu ka ɔman no aduane ho nanso wɔ frɛ no fungi/fungee na wo de aburoaduane ne nkruma na ɛyɛ. Saa nso na wo kɔ Barbados a ɛka ɔman no aduane ho a yɛ frɛ no cou cou na wɔ de aburo aduane anaa breadfruit, te sɛ Caribbeanfo a wɔ ka borofo wɔ islands no su.
Farebae[sesa | edit source]
Fufu/Fufuo yɛ akan nsɛmfua a ɛkyerɛ fafra anaa kabom na efi ɛndɛ Gana, wɔ Asante, Akuapem, ne Guans, Akyem, Bono ne Fante foɔ a ɛwɔ Akan kuo wɔ Gana, na yɛ de bankye ne borɔdeɛ anaa mankeni abomu awɔ wɔ waduro na yɛ de adi nkwan te sɛ nkrakra nkwan, abenkwan, nkate nkwan ne abunabun nkwan. Ɛndɛ ɛka aman horo aduane ho , aman no bi ne Benin, Cameroon, Guinea, Nigeria, ne Togo.
Fufu a agye din wɔ Abibirem Atɔeɛ mamtamu ha no aba nhoma mu a nhoma twerɛfoɔ a ɛwɔ saa mamtamu ha atwerɛ. Yɛ bɔ aduane yi din wɔ nhoma bi te sɛ Chinua Achebe's Things Fall Apart mu.
Sɛ nea yɛ yɛ no[sesa | edit source]
fufu a ya wɔ
Wɔ Gana, bankye ne borɔdeɛ anaa mankeni kakra a ya nua na yɛ wɔ bɔ mu wɔ waduru mu na yɛ de yensa adane dane kɔ si sɛ ɛbɛyɛ nea yɛ pɛ na ye twitwa. Endɛ a fufu machine aba yi , fufu yɛ nhia sɛ nipa bɛ gyena so awɔ biom.
Ahoɔden a ɛwɔ mu[sesa | edit source]
Wo yi fufu 100 g a awo mu a, fufu keta 2 g protein, 0.1 g sradeɛ ne 84 g carbohydrate. Ffu wɔ 267 kcal ahoɔden wɔ 100 g biara a yɛ de nsu ayɛ. Sradeɛ ndɔɔ so wɔ mu. Potassium ayɛ mu ma, na ayaresafoɔ taa ka kyerɛ wɔn a wɔ potassium akɔ fɔm wɔ wɔn mogya mu.Aseda1991 (talk) 13:08, 21 Kutawonsa 2021 (UTC)@Aseda1991
Ntotoho[sesa | edit source]
link a efi abɔnten[sesa | edit source]
Retrieved from "https://ak.wikipedia.org/w/index.php?title=Fufu&oldid=27486"
National dishesYoruba cuisineMaize dishes
CuisineRepublic of the Congo cuisineNigerian cuisineMalian cuisineLiberian cuisineIvorian cuisineGuinean cuisineGhanaian cuisineGabonese cuisineDemocratic Republic of the Congo cuisineCentral African Republic cuisineCameroonian cuisineBurkinabé cuisine
Ional dishesYoruba cuisineMaize dishesStaple foodscuisineCameroonian cuisineBurkinabé cuisine
This page was last edited on 5 Ɔpɛpɔn 2022, at 08:59.